Mase ka iPhone in Android? Ma doonaysaa in ay soo dhoofsadaan in dhammaan music qaaliga ah ee iCloud / iPhone / Lugood si ay u badbaadaan in aad qalab cusub Android? Waa hagaag, ha i hore idiinku digo, oo aad tahay qof ee u badan oo ka kaaftoomi. Maxaad laga yaabaa in aad weydiiso? Waa hagaag, mid ka mid, ma jirto hab by kaas oo aad si toos ah u dajiyaan karaa music ka iCloud in Android. Waa in aad marka hore ka soo dejisan aad music dhan iCloud in aad xisaabta Lugood dibna lagu xiro qalabka aad si aad laptop / computer, isticmaali Manager Google Music si ay u gudbiyaan oo dhan music in qalab aad adigoo raacaya weli set kale ee tilmaamaha. Inkastoo waxaa ka mid ah wax badan oo aan loo baahnayn dajinta oo waqti badan laga yaabaa inay qaadato, waxaa aad u xanibayo in la raaco. Sii qofka badan oo software aan loo baahnayn oo aad weydiisato in furaysto in badan oo ka mid ah qalabka; Xaqiiqdii war uma baahna inuu faahfaahiyo in ay ku noqotaa masiibo, ayaan anigu?
Hadda oo aad xitaa marna ka fekerin habka kor ku xusan oo aad wali u baahan tahay in lagu ogaado hab si ay u gudbiyaan kasta oo muusiko ah in qaali ah. Wondershare MobileTrans waa codsi ah oo loogu talagalay in la sameeyo oo dhan ee Lugood si aad u Android, iCloud in Android iyo xataa iPhone in wareejinta Android stress-xor ah oo ku haboon. Wondershare MobileTrans kuu ogolaanaysaa inaad wareejin music kaliya kharash ku click ah. Iyadoo ay tahay mid fudud in la isticmaalo, xataa dadka aan waligood isku dayay wareejinta music guud ahaan qalabka ka hor, waxa ay sidoo kale waa lacag la'aan ah oo kasoo muuqday taageero muddo ku dhow oo dhan qalabka Android mid qiyaasi kartaa. Waxaa intaa dheer, Wondershare MobileTrans waxaa laga heli karaa labada isticmaala Windows iyo Mac.
Kala beddelashada music ka iCloud in Android waa mid aad u fudud oo isticmaalaya MobileTrans. Si aad u bilaabaan, uu raaci doonaa habraaca fudud:
1. Download Wondershare MobileTrans ka link kor ku siiyo. Sug rakibo si ay u buuxiyaan oo ay maamulaan. Laga soo bilaabo screen guriga, login in aad xisaabta iCloud isticmaalaya Log ee menu.
2. Connect qalab aad si aad laptop / computer. Dooro gurmad iCloud si ay u bilaabaan soo degsado files gurmad ka iPhone in aad laptop / computer.
3. Marka download waa dhameystiran, dooro doonayo gurmad file dhinaca menu gacanta bidix iyo weeraray "Start Copy" in ay wareejiso qalabka Android ku xiran si aad laptop / computer.
Si music ka Lugood in Android lagu wareejiyo, si fudud lagu xiro qalabka aad si aad laptop / computer ka dib markii rakibidda MobileTrans iyo RAAC TILMAAMAHAN:
1. xogta kaabta ka qalab jir doorataa "kaabta" ka menu guriga. Calaamadee dhamaan sanduuqyada u dhigma xogta aad rabto in aad gurmad. Guji "Start Copy" iyo ha MobileTrans kale yeelaan.
2. xogta Copy in aad qalab cusub, haddii ay taasi ku aalad Android adigoo gujinaya "Soo Celinta" doorasho heli karaa menu guriga. Dooro file tarin ka menu dropdown ah, Lugood aad file gurmad kiiskan. Dooro "Start Copy".
Kala beddelashada music ka hore iPhone si cusub Android waa siman fudud la MobileTrans. Just raac tilmaamaha fudud:
1. Run MobileTrans aad laptop / computer, ka menu guriga dooro "Start" iyo daaqadaha kala iibsiga mobile furi doonaa. Labada qalabka (iPhone iyo Android) aad Connect in aad laptop / computer oo ka mid ah liiska ku tilmaamay "Content in aad nuqulka", dooro "Music". Dooro "Start Copy".
2. habka koobiyeynta ayaa toos ah u bilaabi doonaa baar horumarka muujinaya doonaa boqolkiiba xogta oo uu soo guuriyeen. Sug bar ah si ay u gaaraan dhammaadka (100%). Hubi in nidaamka aan la kala gooyey ie aadan dami qalab aad ama ma xiray sababo la xiriira arrimaha wax batari iwm sida keeni karo in musuqmaasuq / khasaaraha xogta.
Waxaan arkay sida MobileTrans ka dhigaysa xogta ka iCloud / Lugood / iPhone wareejinta qalabka our Android dhib badan oo aan. The halleeyo lillaahinimada iyo hufnaan habka iska cad oo uu u baahan yahay ma faahfaahin dheeraada. MobileTrans Sidaa darteed, waxaa loo isticmaali karaa by bilowga ah iyo dadka isticmaala khibrad leh si isku mid ah. Waxaa muhiim ah in si kastaba ha ahaatee, in halkan la soco in kala iibsiga iCloud u shaqeeyo kaliya ee telefoonada Android la version 4.2 iyo wixii ka sareeya, Lugood version 11.3 oo kor ku xusan iyo macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo macruufka 9.
Dheeraad ah Talooyin:
1. Tag oo dhan tilmaamaha si taxadar leh, ma jirto baahi loo qabo in degdegin. Hubi inaad fahamto tallaabo kasta oo ka hor siday habka soo baxay.
2. Mar walba gurmad ah ee aad music iCloud haddii aad wax isku ciyaartid ama wax qaldamaan si lama filaan ah.
3. Iska ilaali software in lagala soo baxo websites xisbiga saddexaad haddii laga heli karaa website-ka rasmiga ah; waxaa laga yaabaa in lagu daray oo wuxuu keeni karaa qadar weyn oo burbur ah si aad u computer / laptop.
> Resource > iCloud > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iCloud in Android